Kambodza · Septambra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Kambodza · Septambra, 2010
Tantara mikasika ny Kambodza tamin'ny Septambra, 2010
Fahalalahàna miteny 21 Septambra 2010
Notsikerain'ny mpiserasera maro ho toy ny fandrisihana tanora hanao fihetsika tsy mendrika ny dokambarotra aterineto nataon'ny orinasan'ny finday. Mitaky ny hanesorana io dokambarotra io ny mpamaham-bolongana.
Shina 11 Septambra 2010
Mirehareha ireo toby fihazonana noho ny fifohana zava-mahadomelina any Azia. Na dia nanolo-tena hiala amin'io fahazaran-dratsin yio aza ny sasany amin'ireo mpiankin-doha amin'ny zava-mahadomelina Aziatika, amin'ireo toerana sasany, nitarika tamin'ny fanararaotana toa misosa ho azy ny zon'olombelona eny an-dalambe izany ka hanidiana ireo olona tsy manan-tsafidy, ampijaliana, aolana, terena hiasa maimaim-poana sy tsy mahazo izay filàna fototra akory.
Hafanàm-po nomerika 05 Septambra 2010